बैठक,छलफलमा सांसद बस्न हुँदैन भन्नु महामारीविरुद्धको अभियानलाई कमजोर बनाउनु हो ! | दर्पण दैनिक
बैठक,छलफलमा सांसद बस्न हुँदैन भन्नु महामारीविरुद्धको अभियानलाई कमजोर बनाउनु हो !
प्रकाशित मिति: २०७७ जेष्ठ ४ गते १२:४२
सिंगो मानवजगत नै कोरोना भाईरसको महामारीसंग जुधिरहेको अहिलेको यो अफ्ट्यारो परिस्थितिको सामना सबैले मिलेर गर्नुको बिकल्प छैन। तर गोदावरी नगरपालिका भुगोलकै हिसाबले सबैभन्दा ठूलो नगरपालिका ,बाहिर बाट उपत्यका छिर्ने महत्त्वपूर्ण नाका हरु भएको नगरपालिका ,यहि नगरपालिकाको बजारबाट ग्रामीण भेग हरुमा खाद्यवस्तु पठाउने पर्ने नगरपालिका ! यी सबै विषयबस्तु हरुलाइ विश्लेषण गर्दा गोदावरी नगरपालिका संक्रमणको हिसाबले अत्यन्तै जोखिम नगरपालिकाको रुपमा रहेको भन्न सकिन्छ। तर यसको रोकथाम ,नियन्त्रण र उपचारको लागि यसको तयारी हेर्दा बुझ्दा र देख्दा अत्यन्तै निराशाजनक स्थितिमा रहेको देखिन्छ।
सुरुका दिन देखिनै हामीले भन्यौं,यो राहत बितरणको तरिका व्यवहारिक भएन। जो जसलाइ पनि भिड्भाड हुने हिसाबले अथवा संक्रमण फैलन सहयोग पुग्ने हिसावले कृयाकलाप हरु सन्चालन गरियो। हामिले सुन्यौं धेरै ठूलो रकम गोदावरी नगरपालिकामा राहतको नाममा खर्च भएको छ। यति ठूलो रकम साँच्चिकै राहतको लागि आवश्यक थियो त ? के आवश्यक नागरिकहरुलाइ मात्रै उक्त बितरण गरियो त ? प्रश्न यहाँनेर छ कि यो राहतको नाममा खर्च भएको यो रकमलाई हामीले स्वास्थ्य सामग्री हरु खरिद (आरडिटि र पिसिआर कीट) हरु खरिद गर्न,आसोलेशन बेड हरु निर्माण गर्न,स्वास्थ्य संस्था हरुलाइ व्यवस्थित गर्न को लागि प्रयोग गरिनु पर्थ्यो। हाम्रा योजना हरु यो महामारी एक ,दुई हप्तामै सकिन्छ भन्ने हिसाबले बनेका देखिन्छन्।
तर यो अत्यन्तै लामो समय सम्म जाने स्थिति देखिन्छ। पछिल्लो समय संक्रमणको वृद्धिदर ह्वात्तै बढनाले र संक्रमण समुदायमा प्रवेश गर्नाले हामिले यस नगरपालिकामा पनि विशेषगरी यसको रोकथाम ,नियन्त्रण र उपचार मा उच्चस्तरको योजना बनाएर प्रभाबकरी ढंगले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने देखिन्छ। यस्तो बेलामा गोदावरी नगरपालिकामा पछिल्लो समय देखिएको विवादले र बाहिर छरिएका भ्रमहरुले जनताहरुलाइ निराश बनाएको छ। वडाध्यक्ष हरुको काम वडामा मात्रै हो भन्नू कार्यपालिका सदस्यहरुको काम ,कर्तव्य र अधिकारको संविधानले निर्दिष्ट गरेको अधिकारको मानमर्दन गरेको हो भन्ने बुझिन्छ। निर्वाचित वडाध्यक्षहरु नगर बोर्ड को महत्त्वपूर्ण सदस्य हरु हुन। यस्तो बेलामा फ्रन्टलाइनमा बसेर काम गर्ने वडाअध्यक्ष हरुलाइ झन उच्च मनोबलका साथ काम गर्न लगाउने बाताबरण बनाउन सक्नु पर्दछ। र उहाँहरुले पनि आफ्नो काम कर्तव्य अधिकार को प्रयोग गर्दै पारदर्शी तरिकाले काम गर्न सक्नु पर्दछ। सफलता त्यहीँनेर छ। गोदावरी नगरपालिकाको मेयरसापले एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा उठाउनु भएको छ,आफ्ना सबै नागरिक हरुको कम्तीमा आरडिटी टेस्ट गर्ने। यो कुरा महत्त्वपूर्ण छ। जोखिमको हिसाबले यो अनिवार्य पनि छ। त्यति मात्रै होइन हामिले क्वारेन्टाइन र पर्याप्त मात्रामा आइसोलेशन बेड हरु निर्माण गर्नु पर्छ। यसको लागि स्वास्थ संस्था हरु मात्रै पर्याप्त हुँदैनन।
यहाँ भएका कलेज ,स्कुल ,होटलहरुलाई हामीले त्यो कार्य गर्ने गरी तयारी गर्नु पर्दछ। यसको लागि प्रदेश सरकार र संघीय सरकारको हामीले महत्त्वपूर्ण सहयोग लिन सक्नु पर्दछ। त्यो भनेको यहाँबाट प्रदेश र संघमा प्रतिनिधित्व गर्ने माननीय हरुसँग पनि समन्वय गर्ने भनेको हो। यहाँका नागरिकहरुको स्वास्थ सुरक्षा दायित्व प्रदेश र संघीय सरकारको पनि हो। त्यसैले यो काममा उहाँहरुको पनि सहयोग लिने कुरामा अथवा उहाँहरुले पनि सहयोग गर्ने कुरालाई हामिले अलि तलै झरेर बरु वडा अध्यक्ष उठेको भए हुन्थ्यो, यहाँ कहाँ कुरा गर्न मिल्छ,कहाँ बैठक मा बस्न मिल्छ,कहाँ सल्लाह गर्न मिल्छ भन्ने जस्ता गैह्रजिम्मेवार तर्कहरुको प्रचार गर्नु जरुरी छैन र हुँदैन पनि। राजनीति अरुबेला वा निर्बाचनको बेलामा गर्ने हो। अहिले संघ ,प्रदेश स्थानीय तहका सबै जनप्रतिनिधि हरु,मिलेर नै एउटै योजना बनाएर,एउटै ताल सुरमा यो माहामारी बिरुद्ध को लडाइमा लाग्ने हो।
त्यसैले प्रभाबकरी योजना बनाउन ,त्यसको प्रभाबकारी कार्यन्वयन गर्न छलफल हरु बैठक हरु घनिभुत रुपमा बस्नै पर्छ ,सल्लाह गर्नै पर्छ। यसमा बैठक मा छलफलमा माननीयहरु बस्न हुँदैन वा गर्न हुँदैन भन्ने कुरा यो माहामारी विरुद्धको अभियानलाई कमजोर बनाउने कुरा हुन्छ। यहाँका नागरिकहरुको स्वास्थ्यमा खेलवाड गर्न खोजिएको बिषय बन्न पुग्छ। तीनै तह संगै बसेर साझा योजना बनाएर अघि बढ्दा अहिले बाहिर देखाएको रोईलो जसरी आकाश नै खस्ने होइन। यहाँबाट वडा ,नगरपालिका ,प्रदेश वा संघ मा निर्बाचित भएका सबै जनप्रतिनिधि हरुले साझा अभियान बनाएर यो माहामारी विरुद्ध लडनु पर्ने आजको आवश्यकता अनुसार यो गोदावरी नगरपालिकाले पनि यस कुरामा सफलता प्राप्त गरोस !धेरै धेरै शुभकामना !